Anatase bụ ụdị sọks a na-egwu mmiri nke titanium dioxide - vidiyo
Zụrụ ihe anụ ahụ na ụlọ ahịa anyị
Anatase bụ sọfeetị na-atọ ụtọ titanium. A na - enweta mmanụ dị n'ụdị okike dịka nwa ojii, ọ bụ ezie na ihe ndị dị ọcha enweghị agba ma ọ bụ ọcha. Uzo abuo ndi ozo bu nke TiO2 bu nke amara, brookite na rutile.
Anatase ka a na-ahuta dika kristal nke pere mpe, nke kewapụrụ onwe ya ma mekwa ka o puta ihe, dika igwe onodu ahu na - agbanwe agbanwe, o na - eti mkpu. Mkpụrụ osisi gemstone ahụ bụ metastat na ọnọdụ okpomọkụ niile na nrụgide niile, ya abaghị uru polymorph. Na agbanyeghị, anatase bụ usoro izizi titanium dioxide mbụ na-etolite n'ọtụtụ usoro, n'ihi ike ala ya dị ala, na-agbanwe mgbanwe na-aga na-eme n'oge okpomọkụ dị elu. Ọ bụ ezie na ogo nke Symmetry bụ otu maka akụkụ abụọ nke anatase na rutile, ọ nweghị mmekọrịta dị n'etiti etiti nke akụkụ abụọ nke mineral ahụ, belụsọ na mpaghara 45m na 90 Celsius. Pyramid nke ahu anakpo, na ihe yiri ihu ya nke nwere ogwe aka zuru oke, nwere akuku nwere akuku 82 ° 9 ′, n'akuku nke rutile bu 56 ° 52½ '. N'ihi pyramid steepụ a,
A nwere ike iche ụzọ dị iche iche ito eto kristal si akpọ kristal. Ihe a na –emekarị dị ka obere pyramid abụọ dị mkpụmkpụ na indigo-acha anụnụ anụnụ ruo na agba na-ahụkarị anya. Kristal nke ụdị a bara ụba na Le Bourg-d'Oisans na Dauphiné, ebe enwere njikọta ya na nkume-kristal, feldspar, na axinite na ngwaọrụ dị na konkiri na mica-schist. Kristal ndị yiri ya, mana nke ihe dị n'ime microscopic, bụ ndị kesara n'ọtụtụ ebe dị egwu, dị ka sandstones, clays, na slates, nke enwere ike ikewapụ ha site na ịsachapụ ihe ndị dị mfe nke okwute ahụ. Ugbo elu nke anumanu bu ihe kachasi ike ma guzogide ebe nile ma obu ya bu ekpughere obula bu ihe ndi ozo.
Kristal nke ụdị nke abụọ enweela ọtụtụ atụmatụ pyramidal etolite, ha na-adịkarị larịị ma ọ bụ mgbe ụfọdụ n'ụzọ omume, agba ahụ bụ mmanụ a -ụ na-acha odo odo na agba aja aja. Crydị kristal ndị a yiri oge a na-ahụ anya ma, n'ezie, ọ dị ogologo oge ha kwesịrị ịbụ nke ụdị a, a na-etinye ha aha amamihe dị na ha. A na-eme ha ka ha dabe na mgbidi nke oghere dị warara nke Alps, Binnenthal dị nso na Brig na canton Valais, Switzerland, bụ ebe a ma ama nke ọma. A makwaara ụdị pseudomorphs nke rutile mgbe anabatasịrị ya.